कारमा यी फिचर छैनन् भने नकिन्दा वेस
8:59 am, शनिबार, जेठ ४, २०७६
काठमाडौं । धेरै व्यक्तिहरु आफ्नो पहिलो कार किन्ने समयमा हुने उत्साहले केहि विशेषताहरुलाई हेर्दै नहेरी निर्णय गर्ने गर्छन् । तर, आजकलको नँया कारहरुमा केहि फिचरहरु नहुदा पुरानो, अपुरो तथा असहज हुने गर्छ ।
आजभोलि हरेक कम्पनीका कारहरू लगभग सबै राम्रो सुविधाहरुसँग सुसज्जित छन् । तरपनि यस्ता फिचरको कमी र महत्त्व केही समयपछि मात्र महसुस गरिन्छ। यहाँ हामी आधुनिक कारहरूमा हुनैपर्ने केहि फिचरको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौं।
१, एबीएस र एयरब्याग
सबैभन्दा पहिला एबीएस (एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) कारहरुमा हुने, एक महत्वपूर्ण सुरक्षा सुविधा हो। यसले आकस्मिक ब्रेकिङको समयमा सवारीलार्इ नियन्त्रणमा राख्छ र यसलाई चिप्लन दिर्दैन।
यसको साथै, अर्को महत्वपूर्ण विशेषता एयरब्याग हो। यस सुविधाले चालक र यात्रीलाई गम्भीर दुर्घटनामा परेको खण्डमा घटनामा घातक चोट पुर्याउनबाट रोक्छ।
२, रियर पार्किंग सेन्सर र क्यामेरा
भिडभाड वा सहरी स्थानमा कार पार्किंग पाउनु र पार्कगर्ने कार्य युध्द जीतेको भन्दा कम छैन। यस्तो अवस्थामा, रियर पार्किङ सेन्सर वा क्यामेराले तपाईलाई सहजता प्रदान गर्छ ।
यो सुविधाले कार पार्क गरेको बेला कारको स्थितिको बारेमा तपाईंलाई सूचित राख्छ। जब केहि कार वा बस्तुहरु कारको नजिकै आउँछ, यसले चालकलाई चेतावनी दिन्छ। त्यसैले, रियर पार्किंग सेन्सर र क्यामेराको मद्दतले सजिलैसँग कुनै पनि तनाव बिना कार गर्न सकिन्छ। यसको सहयोगले, आफ्नै र अरूको सवारीहरूमा हानी हुनबाट रोक्छ ।
३, सेन्टल लकिग सिस्टम
यो पनि एक प्रकारको सुरक्षा सुविधा हो, जसले चोरी वा अन्य हानीनोक्सनी बाट मेहेनतले आर्जित धनबाट खरिद गरेको कार र कारमा रहेको सामानलाइ सुरक्षित राख्छ। यो प्रणालीले कार चोरीको संभावनालाई कम गर्छ।
यसबाहेक, यो प्रणालीले ड्राइभिङको समयमा चारैवटा ढोकाहरूलाई लक गर्छ। यी सुविधाहरूको अतिरिक्त, ठुला कार पार्किङ मा सजिलै आफ्नो कार खोज्नमा पनि यो धेरै उपयोगी हुन्छ ।
४, इन्फोटेन्मेन्ट सिस्टमसँग ब्लुटुथ
धेरै कार कम्पनीहरूले ब्लुटुथ, युएसबी र अक्स कनेक्टिभिटी प्रणालीहरू सहितको कार बनाउन थालेका छन्। यात्रा लामो होस् वा छोटो राम्रो मनोरञ्जन प्रणाली कारमा हुनु जरुरी छ।
आजकल, धेरै कारहरुमा केवल म्युजीक सिस्टम मात्र नभई इन्फोटेन्मेन्ट सिस्टमसहित आउँछन् । कारको अन्य फिचरहरुको बारेमा जानकारी दिनुको अतिरिक्त, यसमा आफ्नो फोन पनि कनेक्ट गर्न सकिन्छ। यस्तो सिस्टमहरू कलगर्ने, मेशेजगर्ने र नेभिगेसन सपोर्टको साथ आउँछन्।
५. पावर विन्डो
पावर विन्डो पहिला एडभान्स फिचरको रुपमा मानिन्थियो तर अहिले यो एक सामान्य विशेषता भएको छ। धेरै कारहरूमा यो सुविधा अगाडीको ढोकाको लागि स्टाडर्ड मानिन्छ ।
यो कारमा हुने केवल एक फिचर मात्र नभई कार र यात्रीको सुरक्षाको लागि पनि एक महत्त्वपूर्ण अंग हो। तपाईको कार खरिदमा अगाडी र पछाडी दुबै स्थानमा पावर विन्डो भएको छान्नुहोस् । कारको खरिद पछिपनि पावर विन्डो जडान गर्न सकिन्छ तर त्यसको क्वालीटी र मेन्टिनेन्स कम्पनी जडित जस्तो हुदैँन ।
६. एडजस्टेबल ओआरवीएम
कारको बाहिरपट्टी दुबै सार्इटमा जडित ऐनालाई आउटसाइड रियर भ्यू मिरर (ओआरभिएम) वा लुकिङ ग्लास भनिन्छ। सुरक्षित र स्मुथड्राइभिङ्गमा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।
आजभोलि यो धेरै कारहरुमा स्टाडर्ड फिचरको रूपमा रहेको छ। तर कतिपय कम्पनीहरूले ड्राइभर साइडमा मात्र यो फिचर दिन्छन् । दुवै साईडमा यो फिचर भएको गाडी छान्दा राम्रो हुन्छ ।